Mikarakara Filazan-tsarin’ny Alina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny Havatsa-Upem ao Arivonimamo dia isan’ny sampana mavitrika. Mikarakara hetsika maromaro ry zareo ao. Ny akaiky indrindra dia io resak’alina io. “Nampitondrainay ny anarana hoe ‘Filazan-tsarin’ny Alina’ ny hetsika” hoy ny mpikarakara iray. Anarana miteraka tsiky imolotra tokoa. Filazan-tsary fa tsy filazantsara araka ny mahazatra ny sofina. Mila alaina sary ny voalazan’ny soratra. Ary ny alina no ifantohan’ny resaka eo.
“Hobiana, Riva ary Ikaky RH” no poety hitantara ny alina hitany. Olona telo samy hafa no hiantsa io resak’alina io. Telo samy manana ny hanitra ho azy. Tsy zaza niara-nilalao fa samy manana ny vanim-potoana nahabe azy. Ikaky RH (Ilay akon'ny Eritra) dia taranaky ny taom-polo 90 (1990-1999). Riva kosa an'ny taom-polo 80.
Ankoatra ny vanim-potoana nahabe azy ireo koa dia izao : Hobiana dia avy any ivelan'Imamo monina eto Imamo ary. Riva dia zanak'Imamo nonina tany ivelan'Imamo. Ikaky RH kosa dia zanak'Imamo monina eto Imamo. Misy fiantraikany eo @ soratr’izy ireo tsirairay avy izay maha samy hafa izay!
Ny antsa dia resaka’alina ary ny hira handravaka ny antsan-tononkalo koa dia hiresaka momba ny alina. Ny haingon-tsehatra ihany koa mazava ho azy. Alina mampatory ve ? Tongava hahita hoy ireo mikarakara. Tongava fa hahita zavatra!
Arivonimamo aiza ? Ao antampon-tanana e !
Milaza moa ireo mpikarakara fa hisy tohiny hetsika manomboka ny 25 novambra hatramin'ny 2 desambra 2017 izao.
Koa tokony hitondra ondana sy bodofotsy kosa ary ve izany ny olona saina ?
033 62 525 68 no laharana hilan-kevitra sy hahazoana fanampim-baovao.